Khatarta dagaalka ganacsi ee ka dhex qarxi kara Maraykanka iyo Shiinaha oo sii kordhaysa – AwKutub News
Khatarta dagaalka ganacsi ee ka dhex qarxi kara Maraykanka iyo Shiinaha oo sii kordhaysa
By awkutubnews July 11, 2018
Leave a Comment on Khatarta dagaalka ganacsi ee ka dhex qarxi kara Maraykanka iyo Shiinaha oo sii kordhaysa
Waxa uu sheegay in Shiinaha aad mooddo in aanu danba ka lahayn in uu beddelo waxa uu ku sheegay hab dhaqankiisa aan caddaaladda ahayn ee uu kaga falcelinayey cashuurtii uu hore Maraykanku ugu soo rogay badeecadaha dalkaasi u dhoofiyo oo qiimaheedu dhan yahay konton bilyan oo doolar.
Talaabooyinka ugu horeeya ayaa la filayaa in ay dhaqan galaan bisha dambe. Wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa iyadna sheegtay in ay si adag uga falcelin doonto arimahaas. Khilaafkani waxa uu markiiba walaac ku abuuray sayladaha dunida ee saamiyada.
Shiinaha ayaa hore u oggolaaday inuu badeecado dheeraad ah kala soo dego Maraykanka, tallaabadaasi oo xukuumadda Washington ay u aragto inay hoos u dhigeyso farqiga ganacsi ee u dhaxeeya Shiinaha oo gaadhaya sadex boqol iyo shan iyo soddon bilyan oo doolar.
Maqaal lagu daabacay wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinhua ayaa lagu sheegay in heshiiskan labada dhinac ay gaareen uu tusaale u yahay guul, ayna Mareykanka ka caawineyso inuu yareeyo farqiga ganacsi ee kala dhaxeeyo Shiinaha, halka Shiinaha na ay ka caawineyso inuu sare u qaado tayada alaabaha uu soo dhoofsado.
Previous Entry Maxaa Kasoo Baxay Shirkii IGAD Ee Jabuuti?
Next Entry Maanso yahanimadu maa loo dhashaa, mise waa la barran karaa?